Heerka sarrifka Forex simay: 24/05/2022 11:22
US dollar - Oo shilin Soomaali qiimaha hadda suuqa sarrifka Forex ee 24 May 2022
11:22:22 (Update heerka Forex ee 59 seconds)
US dollar to Oo shilin Soomaali ayaa lagu muujiyey isweydaarsiga Forex. Fiiri US dollar ilaa Oo shilin Soomaali qiimee 30-kii ilbiriqsi kasta. Heerka sarrifka qadka iyadoo leh isbeddel joogto ah oo ku yimaada sarrifka Forex. Isbeddelka qiimaha waqtiga degdegga ah.
Shaxda ganacsi Forex Oo shilin Soomaali si Dollar ku nool 24 May 2022
Shaxda ganacsi Forex US dollar In Oo shilin Soomaali ku nool yihiin, 24 May 2022
Adeegso shaxda sarrifka ee US dollar to Oo shilin Soomaali dusheeda 24 May 2022. Qiimaha sarrifka ayaa ku habboon in lagu daawado shaxda. U adeegso jiirka si aad u doorato waqtiga saxda ah ee shaxanka oo aad u ogaato US dollar sarrifka lacagaha ee Forex waqtigan. The US dollar garaafka si joogto ah ayaa loo cusbooneysiiyaa, maaddaama bartayada ay xogta ka hesho Forex.
Beddelaan US dollar In Oo shilin Soomaali US dollar In Oo shilin Soomaali Heerka Sarrifka US dollar In Oo shilin Soomaali taariikhda qiimaha sarrifka
Ganacsi Online US dollar (USD) si Oo shilin Soomaali xilligan
Taariikhda sarrifka daqiiqad kasta. Isbeddelka daqiiqada ah ee US dollar ee loo yaqaan Oo shilin Soomaali - 4.69 SOS. Hal daqiiqad sarrifka ah ee US dollar ee ku miiska 10 ka mid ah Oo shilin Soomaali Qiyamka US dollar daqiiqaddii ayaa miiska la dhigaa si ay ugu fududaato in la arko farqiga.
583.50 583.50 583.50 583.50 583.50 583.50 583.50 583.50 583.50 583.50
Ganacsi Online US dollar (USD) si Oo shilin Soomaali ganacsi ee la soo dhaafay saac
Qiimaha sarrifka saacaddiiba boggayaga internetka. isbedelka saac ee US dollar ee ku Oo shilin Soomaali - 4.69 SOS. Shaxdu waxay muujineysaa heerka US dollar si Oo shilin Soomaali saacad walba. Ka eeg xogta sicirka bedka 10 saacadood shaxda ku taal boggan.
Ganacsi Online US dollar (USD) si Oo shilin Soomaali arrimuhu maanta 24 May 2022